Ny Masoandro ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
1 Famakiana Min
Eo amin'ny toerana mety ianao amin'ny fotoana mety.
Ny dikan'ilay karatra «Ny Masoandro»
Ny karatra Masoandro dia momba ny tena - iza ianao ary ahoana no fomba volenao ny toetranao sy ny toetranao. Ny famirapiratan'ny Masoandro no ahitana ny natiora iray amin'ny fahasalamana sy filaminana.. Ny fetran'ny fotoana sy ny habaka dia esorina; mamelombelona ny fanahy ary miaro vonjimaika amin'ny korontana ivelan'ny rindrin'ny zaridaina. Eo ambanin'ny tara-masoandro dia mamerina ny hatsarany, ny fahamarinana ary ny hatsarany voalohany ny fiainana. Raha aseho amin'ity karatra ity ny olona iray, dia mazàna izy io dia midika fahatongavan'olombelona ho andriamanitra.
Rehefa aseho ny olombelona roa dia mampiseho ny famahana ny fihenjanana misy eo amin'ny mifanohitra amin'ny ambaratonga rehetra ny sary. Toy ny hoe miteny ity karatra ity hoe: "Tsy afaka manao ratsy ianao fa ny tsara indrindra rehetra".
Avelao hamirapiratra ny fahazavanao. Matokia ny herin'ny toetranao voalohany.
Manolora fomba fiasa izay hampifanaraka ny zavatra tadiavinao amin'izay mety azo atao ankehitriny.
Ny karatra Ny Masoandro Manoro hevitra anao hanana fahatokisana ny maha Andriamanitra anao voajanahary. Ario ny fifehezana ara-kolotsaina izay manakana anao tsy ho marina amin'ny tenanao. Midira amin'ny fahazavan'ny fahamarinana feno ary ampahafantaro ny antony manosika anao sy ny fitsipikao. Raha vantany vao vita io dia tsy hanome hery ny olona mitsikera sy mahamenatra anao intsony ianao. Mifantoha amin'ny tsara sy ny tena izy. Ny tenanao tena izy dia afaka manazava ny hafa raha kasainao tsy misy artifice izany.
Fandikana ny karatra arakaraka ny toerana misy azy ireo
Aquarius mifanentana amin'ny fitiavana mpivady
Gemini mifanentana amin'ireo famantarana zodiak hafa